လောက သစ္စာ တရား၏ ဒဏ် – MYITMYAT
Homeဆေးမြီတိုလောက သစ္စာ တရား၏ ဒဏ်
လောက သစ္စာ တရား၏ ဒဏ်
ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်း ပန်းတောင်းမြို့နယ် ဥသျှစ်ပင်မြို့သို့ ခရီးကြုံရောက်ခဲ့ရပြန်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကုန်အံ့ဆဲဆဲ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့တွင် WYမူးယစ်ဆေးပြား ၁၄ သန်းကို စံချိန်တင်ဖမ်းမိခဲ့သော ဖြစ်စဉ်ကို အမှတ်ရမိသည်။ ထို့အတူ ထမင်းထုပ်၊ ကွမ်းထုပ်နဲ့ တောထဲမှာ ၈ ရက်ကြာကင်းထောက်ခဲ့သူကို ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရုံးမှ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာလ၏ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုထိုက်သူဆုရရှိခဲ့သော ကိုရာဇာဟိန်းကို သတိရမိသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုရာဇာဟိန်းတို့နေထိုင်ရာ ရုံးလမ်းကလေးထဲသို့ ချိုးကွေ့ဝင်လာခဲ့သည်။
ယခင်က အပ်ချုပ်စက်သင်တန်းသူများ၏ စကားသံ၊ ရယ်မောသံတို့ဖြင့် စည်ကားခဲ့သော ကိုရာ ဇာဟိန်း၏ဇနီးစက်ချုပ်သင်တန်းဆရာမ မဆွေဆွေ၏ စက်ချုပ်ဆိုင်ကလေးသည် တိတ်ဆိတ်လျက် ခြံအစွန်း ဘက်ရှိ ကိုရာဇာဟိန်း၏ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်လေးသည်လည်း ဖုန်အလိမ်းလိမ်း ပင့်ကူမျှင်အထပ်ထပ်နှင့် တွေ့ရသည်။ ထိုမြင်ကွင်းကို အံ့သြမှင်တက်စွာ ငေးကြည့်နေစဉ် မဆွေဆွေထွက်လာရင်း မြင်သွားသည်။
”ကိုရာဇာက ဇလီဖားတုံးစက်ရုံမှာ သံချည်သံကွေးလုပ်နေရတယ်”ဟု ဆိုသည်။ ထို့နောက် ”ပြောရရင်တော့ အရှည်ကြီးပါပဲ။ အဲဒီမူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ဖမ်းပြီးကတည်းက မူးယစ်ရာဇာတွေက လက်စားချေမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအမြင်တွေနဲ့ စက်ချုပ်သင်တဲ့ ကလေးမတွေလည်း မလာတော့ဘူး။ နောက် စေ့သေနတ်မှန်မှာစိုးလို့တဲ့။ သင်တန်းသူမရှိတော့ သင်တန်းက အလိုလိုရပ်သွားတာပေါ့။ စက်ဆိုင်တောင် လူသိပ်မလာကြတော့ဘူး”ဟု မဆွေဆွေက ညှိုးငယ်စွာ ပြောသည်။
”သူများတွေအမြင်မှာတော့ ရဲချုပ်က ဆုပေးလိုက်၊ အမေစုက ပေးလိုက်ဆိုတော့ အဆင်ပြေနေကြ တယ်ထင်မှာပေါ့။ တကယ်က ရဲချုပ်ကိုယ်စား ပဲခူးတိုင်းရဲမှူးကြီးကပေးတော့ သွားယူရတယ်။ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း လွှာပါ။ ငွေမပါဘူး။ ပန်းတောင်း မြို့နယ်အသင်း ရန်ကုန်က ငွေသုံးသိန်းနဲ့ ဂုဏ်ပြုလွှာနောက် ရွှေပင် ဘကကျောင်းဆရာတော် ဦးတိဿနှင့် တပည့်များက ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလွှာနဲ့ ငွေတသိန်း၊ ဥသျှစ်ပင်ကြက်ခြေနီနဲ့ စာပေအဖွဲ့က နှစ်သိန်းရပါတယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့မွေးနေ့မှာ နေပြည်တော်ကို သွားပြီး ရဲချုပ်ကပေးတဲ့ အဲဒီဂုဏ်ပြုလွှာကို ပန်းကနုတ်ဘောင် ကွပ်ပေးပြီး Vivo ဖုန်းတလုံးနဲ့ ပြန်ပေးပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလွှာကတော့ မှတ်တမ်းတင်တာနဲ့ တူပါတယ်။ လက်မှတ်တောင် မရဘူး။ ကျွန်မတို့က အမေစုလက်မှတ် ကလေးမြင်ယောင် နေတာဟဲဟဲ”ဟု ရှက်ရယ်ရယ် ကာ ဆိုသည်။
”နေပြည်တော်ရောက်တုန်း ထူးခြားတာက သူလိုထူးချွန်ဂုဏ်ပြုပွဲမှာ အခြားထူးချွန်ရဲဝန်ထမ်းတွေနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ သူတို့က ရာထူးတဆင့်တိုးတွေနဲ့ပေါ့”ဟု သူမက ဆက်ပြောသည်။
မဆွေဆွေပြောစကားများအရ သူတို့နှစ်ဦး၏ လူမှုဘဝကျဉ်းသွားသလို ခံစားမိပြီး ဟိုမသွားရဲ၊ ဒီ မလာရဲဖြစ်နေရသည်ဟု ဆိုသည်။ တခါက ငါးမျက်နှာဘုရားဖူးပြီးအပြန် ၎င်းတို့စီးလာသော ဆိုင်ကယ်ကို အိမ်စီးကားတစီးက ပွတ်တိုက်ခဲ့သည်မှာ အရှောင်မြန်သော်လည်း နောက်မှထိုင်စီးသော သူမ၏ ဒေါက်မြင့် ဖိနပ်ကို ချိတ်မိပြီး ကျွတ်ကျန်ခဲ့သည်ကို မှောင်နေသဖြင့် ပြန်မကောက်ရဲဟု ပြောပြသည်။
”ခေတ်ကာလကလည်း ဟိုနေရာ လူသတ်မှု၊ ဘယ်နှလောင်းပြိုင်၊ ဘယ်လိုစသည်ဖြင့် မကြာမကြာ ကြားသိနေရတော့ ကလေးတွေအတွက်လည်း စိုးရိမ်မိတယ်။ သူတော့ မသိဘူး။ ကျွန်မတော့ ကြောက်လာပြီ။ သူ့ယောက်ဖကလည်း ဒီကိစ္စဂျာနယ်မှာ ဖွင့်ချလိုက်ကတည်းက မခေါ်မပြောတော့ဘူး။ သူက ရာထူး တိုးသွား တယ်လေ။ လုံခြုံရေးပေးတယ်ဆိုတာလည်း ဘယ်လိုပြောရပါ့။ ပေးတော့ပေးတယ် အစ်ကိုရေ ဒီနေ့ကျွန်တော် တာဝန်ကျတယ်။ လမ်းထိပ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ရှိမယ်ဆိုသွားရော၊ ဘယ်သူက ငုတ်တုတ် ကြီးထိုင်စောင့်နိုင် မလဲ။ သူတို့ကိုလည်း အပြစ်မမြင်ပါဘူး။ ပြည်သူနဲ့ ရဲနဲ့ အင်အားမှ မမျှတာ။ သူတို့တာဝန်တွေတောင် သူတို့လက်မလည်ဘဲ အခြားတာဝန်တွေအများကြီးလေ”ဟု ပြောရှာသည်။
ဟိုတုန်းကဆိုလျှင် ကိုရာဇာဟိန်းဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင် အလုပ်ပါးချိန်များတွင် ယောက်ဖဖြစ်သူ ယာဉ်ထိန်းခေါင်းဆောင်က သူအလုပ်များချိန် ခေါ်ခိုင်းတတ်သည်။ လမ်းလေးခွဆုံရဲ့ကားအဝင်အထွက်ကို မှတ်ပေးရသော အလုပ်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် လကုန်လျှင် မုန့်ဖိုးပေးသည့်အတွက် စားဝတ်နေရေး ချောင်လည် ပြီး အဆင်ပြေခဲ့ကြသည်။ ယခုတော့ ယောက်ဖဖြစ်သူက ရာထူးတိုးပြီး သူနှင့် သင့်တော်သော နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်သည်။ ထိုအလုပ်မျိုးကိုလည်း နောက်လူက ပေးရန်ဝန်လေးပေလိမ့်မည်ဟု သူမက တွက်ဆချင့်ချိန်စွာ ပြောပြခဲ့သည်။
ထိုအမှုကို တရားရုံးတွင် ရင်ဆိုင်နေသူများကလည်း ရှေ့နေ ရှေ့ရပ်စုံလင်စွာနှင့် ရုံးတော်တွင် ကိုရာဇာဟိန်းအား မေးခွန်းများကို ခက်ခဲစွာမေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
”ကိုရာဇာဟိန်းက ပြောပြတယ်။ ရှေ့နေမတွေ က စွတ်ဟောက်တာတဲ့။ အမှန်မှာ ကားကို မိက တည်းက တယောက်ကခုန်ချပြီး ချောက်ထဲဆင်းပြေးတာ။ ကိုရာဇာက ဖမ်းဖမ်းဆိုတာ မဖမ်းကြတော့ ကြောင်နေကြတာလည်း ပါမှာပေါ့။ အဲဒီကနေ မဝေးတဲ့ဂိတ်တခုမှာ ခြေထောက်နာသွားတာကုရင်း တော် တော်ကြာကြာနေနေတာလည်း သတင်းရတယ်။ ကိုယ့်တာဝန်က သတင်းပဲပေးရတာ၊ ဖမ်းရတာမှ မဟုတ်ဘဲလေ”ဟု ပြောသည်။
ထိုဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပန်းတောင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်နှင်းသစ် ကလည်း လွှတ်တော်တွင် မေးခွန်းမေးခဲ့ပြီး ဂုဏ်ပြုခံရသူအား ချီးမြှင့်ရန် အစီအစဉ်မရှိပါဟု သက်ဆိုင်ရာက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်က ပန်းတောင်း မြို့နယ်၊ ညောင်ဂျိုးဂိတ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သော WY စိတ်ကြွ ရူးသွပ်ဆေးပြား ၁၄ သန်းသည် ကိုရာဇာဟိန်း တောထဲတွင် ပင်ပန်းခက်ခဲစွာ သတင်းစုဆောင်းရင်း တာဝန်သိ ပြည်သူတယောက်အဖြစ် သတင်းပေးပို့ရာမှ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက် ခဲ့ရသော်လည်း လက်တွေ့ဘဝတွင် လောကသစ္စာ၏ ဒဏ်ကိုခံစားနေရခြင်းဖြစ်လေရော့ မလား။ လောကသစ္စာ အရ တာဝန်သိဖို့ သစ္စာရှိဖို့ လွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်သော်လည်း လောကသစ္စာရဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားပေတော့ ညီငယ်ကိုရာဇာဟိန်းရေ . . . ဟု စိတ်ထဲမှ အားပေးရင်း အပြန်လမ်းတလျှောက် ခေါင်းငိုက်စိုက်ချလျက် . . . ။
ပဲခူးတိုငျးအနောကျခွမျး ပနျးတောငျးမွို့နယျ ဥသြှဈပငျမွို့သို့ ခရီးကွုံရောကျခဲ့ရပွနျသညျ။ ၂၀၁၆ ခုနှဈကုနျအံ့ဆဲဆဲ ဒီဇငျဘာ ၁၀ ရကျနတှေ့ငျ WYမူးယဈဆေးပွား ၁၄ သနျးကို စံခြိနျတငျဖမျးမိခဲ့သော ဖွဈစဉျကို အမှတျရမိသညျ။ ထို့အတူ ထမငျးထုပျ၊ ကှမျးထုပျနဲ့ တောထဲမှာ ၈ ရကျကွာကငျးထောကျခဲ့သူကို ပွညျထောငျစု မွနျမာနိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျရုံးမှ ၂၀၁၇ ဇနျနဝါရီလ ၂၂ ရကျနစှေဲ့ဖွငျ့ ထုတျပွနျခဲ့သော ၂၀၁၆ ဒီဇငျဘာလ၏ ခြီးကြူးဂုဏျပွုထိုကျသူဆုရရှိခဲ့သော ကိုရာဇာဟိနျးကို သတိရမိသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ကိုရာဇာဟိနျးတို့နထေိုငျရာ ရုံးလမျးကလေးထဲသို့ ခြိုးကှဝေ့ငျလာခဲ့သညျ။
ယခငျက အပျခြုပျစကျသငျတနျးသူမြား၏ စကားသံ၊ ရယျမောသံတို့ဖွငျ့ စညျကားခဲ့သော ကိုရာ ဇာဟိနျး၏ဇနီးစကျခြုပျသငျတနျးဆရာမ မဆှဆှေေ၏ စကျခြုပျဆိုငျကလေးသညျ တိတျဆိတျလကျြ ခွံအစှနျး ဘကျရှိ ကိုရာဇာဟိနျး၏ ဆိုငျကယျပွငျဆိုငျလေးသညျလညျး ဖုနျအလိမျးလိမျး ပငျ့ကူမြှငျအထပျထပျနှငျ့ တှရေ့သညျ။ ထိုမွငျကှငျးကို အံ့သွမှငျတကျစှာ ငေးကွညျ့နစေဉျ မဆှဆှေထှေကျလာရငျး မွငျသှားသညျ။
”ကိုရာဇာက ဇလီဖားတုံးစကျရုံမှာ သံခညျြသံကှေးလုပျနရေတယျ”ဟု ဆိုသညျ။ ထို့နောကျ ”ပွောရရငျတော့ အရှညျကွီးပါပဲ။ အဲဒီမူးယဈဆေးဝါးတှေ ဖမျးပွီးကတညျးက မူးယဈရာဇာတှကေ လကျစားခမြေယျဆိုတဲ့ အတှေးအမွငျတှနေဲ့ စကျခြုပျသငျတဲ့ ကလေးမတှလေညျး မလာတော့ဘူး။ နောကျ စသေ့နေတျမှနျမှာစိုးလို့တဲ့။ သငျတနျးသူမရှိတော့ သငျတနျးက အလိုလိုရပျသှားတာပေါ့။ စကျဆိုငျတောငျ လူသိပျမလာကွတော့ဘူး”ဟု မဆှဆှေကေ ညှိုးငယျစှာ ပွောသညျ။
”သူမြားတှအေမွငျမှာတော့ ရဲခြုပျက ဆုပေးလိုကျ၊ အမစေုက ပေးလိုကျဆိုတော့ အဆငျပွနေကွေ တယျထငျမှာပေါ့။ တကယျက ရဲခြုပျကိုယျစား ပဲခူးတိုငျးရဲမှူးကွီးကပေးတော့ သှားယူရတယျ။ ဂုဏျပွုမှတျတမျး လှာပါ။ ငှမေပါဘူး။ ပနျးတောငျး မွို့နယျအသငျး ရနျကုနျက ငှသေုံးသိနျးနဲ့ ဂုဏျပွုလှာနောကျ ရှပေငျ ဘကကြောငျးဆရာတျော ဦးတိဿနှငျ့ တပညျ့မြားက ခြီးကြူးဂုဏျပွုလှာနဲ့ ငှတေသိနျး၊ ဥသြှဈပငျကွကျခွနေီနဲ့ စာပအေဖှဲ့က နှဈသိနျးရပါတယျ။
ရဲတပျဖှဲ့မှေးနမှေ့ာ နပွေညျတျောကို သှားပွီး ရဲခြုပျကပေးတဲ့ အဲဒီဂုဏျပွုလှာကို ပနျးကနုတျဘောငျ ကှပျပေးပွီး Vivo ဖုနျးတလုံးနဲ့ ပွနျပေးပါတယျ။ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျရဲ့ ခြီးကြူးဂုဏျပွုလှာကတော့ မှတျတမျးတငျတာနဲ့ တူပါတယျ။ လကျမှတျတောငျ မရဘူး။ ကြှနျမတို့က အမစေုလကျမှတျ ကလေးမွငျယောငျ နတောဟဲဟဲ”ဟု ရှကျရယျရယျ ကာ ဆိုသညျ။
”နပွေညျတျောရောကျတုနျး ထူးခွားတာက သူလိုထူးခြှနျဂုဏျပွုပှဲမှာ အခွားထူးခြှနျရဲဝနျထမျးတှနေဲ့ မိတျဆှဖွေဈခဲ့ရတယျ။ သူတို့က ရာထူးတဆငျ့တိုးတှနေဲ့ပေါ့”ဟု သူမက ဆကျပွောသညျ။
မဆှဆှေပွေောစကားမြားအရ သူတို့နှဈဦး၏ လူမှုဘဝကဉျြးသှားသလို ခံစားမိပွီး ဟိုမသှားရဲ၊ ဒီ မလာရဲဖွဈနရေသညျဟု ဆိုသညျ။ တခါက ငါးမကျြနှာဘုရားဖူးပွီးအပွနျ ၎င်းငျးတို့စီးလာသော ဆိုငျကယျကို အိမျစီးကားတစီးက ပှတျတိုကျခဲ့သညျမှာ အရှောငျမွနျသျောလညျး နောကျမှထိုငျစီးသော သူမ၏ ဒေါကျမွငျ့ ဖိနပျကို ခြိတျမိပွီး ကြှတျကနျြခဲ့သညျကို မှောငျနသေဖွငျ့ ပွနျမကောကျရဲဟု ပွောပွသညျ။
”ခတျေကာလကလညျး ဟိုနရော လူသတျမှု၊ ဘယျနှလောငျးပွိုငျ၊ ဘယျလိုစသညျဖွငျ့ မကွာမကွာ ကွားသိနရေတော့ ကလေးတှအေတှကျလညျး စိုးရိမျမိတယျ။ သူတော့ မသိဘူး။ ကြှနျမတော့ ကွောကျလာပွီ။ သူ့ယောကျဖကလညျး ဒီကိစ်စဂြာနယျမှာ ဖှငျ့ခလြိုကျကတညျးက မချေါမပွောတော့ဘူး။ သူက ရာထူး တိုးသှား တယျလေ။ လုံခွုံရေးပေးတယျဆိုတာလညျး ဘယျလိုပွောရပါ့။ ပေးတော့ပေးတယျ အဈကိုရေ ဒီနကြေှ့နျတျော တာဝနျကတြယျ။ လမျးထိပျလကျဖကျရညျဆိုငျမှာ ရှိမယျဆိုသှားရော၊ ဘယျသူက ငုတျတုတျ ကွီးထိုငျစောငျ့နိုငျ မလဲ။ သူတို့ကိုလညျး အပွဈမမွငျပါဘူး။ ပွညျသူနဲ့ ရဲနဲ့ အငျအားမှ မမြှတာ။ သူတို့တာဝနျတှတေောငျ သူတို့လကျမလညျဘဲ အခွားတာဝနျတှအေမြားကွီးလေ”ဟု ပွောရှာသညျ။
ဟိုတုနျးကဆိုလြှငျ ကိုရာဇာဟိနျးဆိုငျကယျပွငျဆိုငျ အလုပျပါးခြိနျမြားတှငျ ယောကျဖဖွဈသူ ယာဉျထိနျးခေါငျးဆောငျက သူအလုပျမြားခြိနျ ချေါခိုငျးတတျသညျ။ လမျးလေးခှဆုံရဲ့ကားအဝငျအထှကျကို မှတျပေးရသော အလုပျဖွဈသညျ။ ထို့နောကျ လကုနျလြှငျ မုနျ့ဖိုးပေးသညျ့အတှကျ စားဝတျနရေေး ခြောငျလညျ ပွီး အဆငျပွခေဲ့ကွသညျ။ ယခုတော့ ယောကျဖဖွဈသူက ရာထူးတိုးပွီး သူနှငျ့ သငျ့တျောသော နရောသို့ ပွောငျးရှသှေ့ားပွီဖွဈသညျ။ ထိုအလုပျမြိုးကိုလညျး နောကျလူက ပေးရနျဝနျလေးပလေိမျ့မညျဟု သူမက တှကျဆခငျြ့ခြိနျစှာ ပွောပွခဲ့သညျ။
ထိုအမှုကို တရားရုံးတှငျ ရငျဆိုငျနသေူမြားကလညျး ရှနေ့ေ ရှရေ့ပျစုံလငျစှာနှငျ့ ရုံးတျောတှငျ ကိုရာဇာဟိနျးအား မေးခှနျးမြားကို ခကျခဲစှာမေးခဲ့သညျဟု ဆိုသညျ။
”ကိုရာဇာဟိနျးက ပွောပွတယျ။ ရှနေ့မေတှေ က စှတျဟောကျတာတဲ့။ အမှနျမှာ ကားကို မိက တညျးက တယောကျကခုနျခပြွီး ခြောကျထဲဆငျးပွေးတာ။ ကိုရာဇာက ဖမျးဖမျးဆိုတာ မဖမျးကွတော့ ကွောငျနကွေတာလညျး ပါမှာပေါ့။ အဲဒီကနေ မဝေးတဲ့ဂိတျတခုမှာ ခွထေောကျနာသှားတာကုရငျး တျော တျောကွာကွာနနေတောလညျး သတငျးရတယျ။ ကိုယျ့တာဝနျက သတငျးပဲပေးရတာ၊ ဖမျးရတာမှ မဟုတျဘဲလေ”ဟု ပွောသညျ။
ထိုဖွဈစဉျနှငျ့ ပတျသကျ၍ ပနျးတောငျးမွို့နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါခငျနှငျးသဈ ကလညျး လှတျတျောတှငျ မေးခှနျးမေးခဲ့ပွီး ဂုဏျပွုခံရသူအား ခြီးမွှငျ့ရနျ အစီအစဉျမရှိပါဟု သကျဆိုငျရာက ပွနျလညျဖွကွေားခဲ့သညျဟု သိရသညျ။
၂၀၁၆ ဒီဇငျဘာ ၁၀ ရကျက ပနျးတောငျး မွို့နယျ၊ ညောငျဂြိုးဂိတျတှငျ ဖမျးဆီးရမိခဲ့သော WY စိတျကွှ ရူးသှပျဆေးပွား ၁၄ သနျးသညျ ကိုရာဇာဟိနျး တောထဲတှငျ ပငျပနျးခကျခဲစှာ သတငျးစုဆောငျးရငျး တာဝနျသိ ပွညျသူတယောကျအဖွဈ သတငျးပေးပို့ရာမှ ပျေါပေါကျလာခွငျးဖွဈသညျ။ ဤအတှကျ ဂုဏျယူဝမျးမွောကျ ခဲ့ရသျောလညျး လကျတှဘေ့ဝတှငျ လောကသစ်စာ၏ ဒဏျကိုခံစားနရေခွငျးဖွဈလရေော့ မလား။ လောကသစ်စာ အရ တာဝနျသိဖို့ သစ်စာရှိဖို့ လှယျကူကောငျးလှယျကူနိုငျသျောလညျး လောကသစ်စာရဲ့ ဒဏျရာဒဏျခကျြမြားကို ခံနိုငျရညျရှိရနျ ကွံ့ကွံ့ခံနိုငျအောငျ ကွိုးစားပတေော့ ညီငယျကိုရာဇာဟိနျးရေ . . . ဟု စိတျထဲမှ အားပေးရငျး အပွနျလမျးတလြှောကျ ခေါငျးငိုကျစိုကျခလြကျြ . . . ။
အဆိပ်​ အားလုံးရဲ့ ဘုရင်​ ​မြွေ​ဟောက်​ပင်